B10B मार्केटरहरूको लागि2फेसबुक रणनीति Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 1, 2011 आइतबार, जुलाई 7, 2013 Douglas Karr
ब्रान्ड्लु, एक न्यूजफीड अप्टिमाइजेसन उपकरण जसले पृष्ठहरूलाई उच्चको साथ रैंक गर्दछ फेसबुक एल्गोरिथ्म, प्रयोग गरेर अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेको छ पृष्ठ लिभर तिनीहरूले कसरी मद्दत गरे तथ्या .्क Eloqua उनीहरूको फेसबुक समुदाय २,2,500००% ले वृद्धि गर्नुहोस्। यो एक उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण हो, अवतरण ट्याब, स्वीपटेक्स, रेफरल डाटा, सामग्री, समय, आदि को उपयोग मार्फत हिंडेर। फेसबुक मा परिणामस्वरूप २,2,500००% को वृद्धिले १ %०% थप Eloqua लाई फर्कायो। राम्रो काम!
बाट तल लाइन Eloqua पोष्ट प्रस्तुतिमा:
स्वत: पोष्टिंग उपकरणहरू प्रयोग रोक्नुहोस्: तिनीहरू तपाईंको सामग्रीको दृश्यता क्लाउड गर्छन्।
नयाँ आगन्तुकहरूको लागि अवतरण ट्याब सिर्जना गर्नुहोस्: तपाईंले रूपान्तरणमा यसको प्रभाव पार्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न।
बाट आफ्नो ध्यान सिफ्ट गर्नुहोस् पृष्ठ दृश्य लाई स्ट्रिम दृश्य: कार्य न्यूजफीडमा हुन्छ।
बाट थप प्रस्तुतीकरणहरू हेर्नुहोस् Eloqua
टैग: b2bb2b फेसबुकब्रान्ड्लुएलोक्वाफेसबुक b2bफेसबुक मार्केटिंगजो चेर्नोभपेजलेभर
डिसे 1, 2011 मा 9: 26 AM
हे डग! B10B डेकको लागि फेसबुक समाधान गर्नका लागि2तरिकाहरू साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। समर्थनलाई साँच्चिकै कदर गर्नुहोस्! - जो
डिसे 1, 2011 मा 10: 10 AM
तपाईं शर्त, जो! प्रेम गर्नुहोस् कसरी तपाईले आफ्नो रणनीतिहरु साझा गर्नुभयो - हामी यहाँ पनि त्यसो गर्न कोशिस गर्छौं।
सुझावहरूको लागि THX